"मोरक्को बसोबास गर्ने यस उप-इष्टतम सन्तुलनबाट बाहिर निस्कनु जरुरी छ" - Jeune Afrique - TELES RELAY
"मोरक्को बसोबास गर्ने यस उप-इष्टतम सन्तुलनबाट बाहिर निस्कनु जरुरी छ" - जेउन अफ्रिक
कडा राज्य, वालिसको भूमिकाको सुदृढीकरण, डाक्टरहरूको स in्ख्यामा बृद्धि, शिक्षकहरूको पदोन्नति र प्रशिक्षण… राजनीतिक वैज्ञानिकले राज्यको विकास हासिल गर्न बेन्मुस्सा आयोगले सिफारिस गरेका तत्वहरूको विश्लेषण गर्दछ।
मे २ On मा, केहि महिनाको प्रतिक्षा पछि, आयोगको अध्यक्षता गरियो चकिब बेन्मुसा अन्ततः मोरोक्कोको नयाँ विकास मोडेलमा यसको प्रतिबिम्बको फल सार्वजनिक गर्‍यो। एक सम्मिश्रित कागजात, १ pages० पृष्ठहरू जसको अभिव्यक्ति, महत्वाकांक्षाहरू, कुञ्जीहरू हुन् ... तर कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रमको तर्फबाट होइन।
राजा मोहम्मद VI को अनुरोधमा संकल्पित, र मोरोक्का देशहरु लाई आफ्नो देश उदाउन र विकास ट्रेन लिन चाहने सबैको लागि चाहानुहुन्छ, तथापि यस रिपोर्टले पहिलो नजरमा अपूर्णको स्वाद छोड्दछ।
सरकार वा राजनैतिक दल बदल्न नचाहने हो भने त्यहाँ प्रस्तुत विचारहरू कहिलेकाँही अलि सामान्यवादी, अपमानजनक वा लंबवर्तित पनि देखिन्छन्।
तर यस सघन म्याग्माको बीचमा, जसलाई राम्रो उद्देश्यको सामूहिक घोषणासँग तुलना गर्न सकिन्छ, त्यहाँ यद्यपि यहाँ र त्यहाँ केही ठोस प्रस्तावहरू छन्, विशेष गरी शिक्षा वा स्वास्थ्य जस्ता आवश्यक विषयहरूमा। साथ साथै राज्य के विशिष्टता र शक्ति बनाउँछ के एक अनुस्मारक। मोहम्मद तोजी, विज्ञान-पो Aix मा प्रोफेसर र यस आयोगको सदस्यबाट स्पष्टीकरण।
ज्यून अफ्रिक: तपाईका अनुसार बेन्मुसा आयोगले राजा मोहम्मद VI लाई प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको सबैभन्दा मुख्य बुँदाहरू के के हुन्? विशेष गरी विषयहरूमा जहाँ परिवर्तन उत्सुकताका साथ पर्खिन्छ जस्तै स्वास्थ्य वा शिक्षा जस्ता...
मोहम्मद tozy : सिफारिसहरूको सर्तमा प्रतिवेदनबाट के स्पष्ट रूपमा उठ्ने कुरा ठोस र मात्रामा सिफारिस सहित शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित छ। आयोगको कामको शुरुवाती छलफलमा त्यस्तो विस्तृत तहमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थिएन, किनकि हामी राजनीतिक कार्यक्रम बनाउँदैनौं वा सरकारलाई बदल्नु हुँदैन।
एउटा मोडेल प्रस्तावित गर्नु पर्ने थियो, तर रोजाई व्यावहारिक उदाहरणहरू दिनको लागि गरिएको थियो जुन केही क्षेत्रमा सम्भाव्यताको प्रमाणको रूपमा काम गर्दछ।
शिक्षामा, निदान स्पष्ट छ, विशेष गरी यस क्षेत्रमा लगानीको स्तर र अपेक्षित परिणामहरू बीचको भिन्नतामा। यो सुधारका लागि सुधार थप्नको लागि होइन जुन सुरु भैरहेको छ। तर अर्कोतर्फ, हामीले चीजहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठायौं। र यो सबै सार्वजनिक नीतिहरूको लागि मान्य छ।
ठ्याक्कै। हामी किन सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न असमर्थ छौं, जुन आज विभिन्न क्षेत्रमा धेरै छन्?
पहिलो, किनकि हामी कहिले पनि पूर्ण रूपमा प्याकेज लिदैनौं। हामीलाई थाहा छ के सजिलो छ, र हामी सधैं गाह्रो कुरा छोड्छौं। शिक्षामा, उदाहरणका लागि, हामी कक्षाहरू निर्माण गर्दछौं, तर हामी स्कूलका कार्यक्रमहरूसँग व्यवहार गर्दैनौं। किनभने यी कार्यक्रमहरूले मान, सामाजिक परियोजनाहरूको प्रश्नहरू खडा गर्छन्, त्यसैले हामी तिनीहरूलाई एकान्तमा राख्छौं।
विश्वविद्यालय प्रणालीको असफलताको बीचमा शिक्षकहरूको भर्ना गर्नु हुँदैन
थप रूपमा, हामी मानव संसाधनहरूमा पर्याप्त ध्यान दिदैनौं, शिक्षकहरुलाई परिचालन र बनाउन। शिक्षकहरू अत्यन्त शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति हुन् भन्ने तथ्यले पक्कै पनि यो भूमिका खेलेको छ।
शिक्षामा कागजातमा यो परिप्रेक्ष्यमा राखिएको छ, जहाँ अभिमुखीकरणमा स्पष्ट छनौट गर्न र शिक्षकहरूको राम्रो देखभाल गर्न सिफारिस गरिन्छ।
"शिक्षकहरूको हेरचाह गर्नु" भनेको के हो?
यो लेख पहिलो पटक https://www.jeuneafrique.com/1182290/politique/mohamed-tozy-il-est-urgent-de-sortir-de-cet-equilibre-sous-optimal-dans-lequel-vit -the मा प्रकाशित भयो मोरक्को /
मौरिटानिया कसरी माछा मार्ने काम गर्न चाहन्छ - जुने अफ्रिक
लिनले एम्मा लोहोइज, कारमेन समा, नथाली कोहको पापोसको निन्दा र भंग गर्दछ ... - भिडियो